रूसी भारी मिसिन बन्दुक र शान्ति। भारी मिसिन बन्दुक को तुलना
भारी मिसिन बन्दुक - यो युद्धभूमिमा मौलिक नयाँ र भयानक हतियार देखा पनि प्रथम विश्व युद्ध मा। ती वर्ष मा परंपरागत को पैदल (पृथ्वी र काठ को) द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो सामान्यतया सही माध्यम penetrated भारी गोलीले छन् तिनीहरूलाई सुरक्षा गर्न सक्षम हुनेछ जो कुनै हतियार, र आश्रय, त्यहाँ थियो। पनि आज, भारी मिसिन बन्दुक शत्रु पैदल लड वाहन, Armored कर्मियों वाहक र हेलिकप्टर विनाश लागि एक उत्कृष्ट उपकरण हो। सिद्धान्त मा, एक पनि हवाईजहाज ठोक्नुहोस्, तर तिनीहरूलाई लागि आधुनिक लडाई विमान धेरै छिटो गर्न सक्नुहुन्छ।
तथापि, सबै त्यस्ता हतियार को मुख्य बेफाइदा यसको वजन र आयाम छन्। केही मोडेल (बेड) राम्रो थप दुई भन्दा किलोग्राम वजन सक्छ। आफ्नो अक्सर तीन वा मात्र दुई मान्छे हुन्छन् को गणना भएकोले केही छिटो maneuvering बारेमा सामान्य आवश्यक बोल्न। तर, भारी मिसिन बन्दुक अझै पनि मोबाइल पर्याप्त हतियार हुन सक्छ। यो पहिलो नै विश्व युद्ध, तिनीहरूले jeeps र पनि एउटा सानो ट्रक धारण गर्न थाल्दा त्यो समयमा अझै पुष्टि हुन्छ।
1930 मा, प्रसिद्ध डिजाइनर Degtyarev पूर्णतया नयाँ मेशिन गन विकास गर्न थाले। त्यसैले यो दिन सेवा मा संसारभरि धेरै देशहरूमा खडा जो दिग्गज DSK, को कथा सुरु हुन्छ। Gunsmith को क्यासेट एक बुलेट कैलिबर संग बी-30 12.7 मिमि समयमा नयाँ लागि यो डिजाइन गर्ने निर्णय गरे। नयाँ बन्दूक लागि सिर्जना कुख्यात Shpagin मौलिक बेल्ट शक्ति विभिन्न सिस्टम छ। 1939 को सुरुमा उहाँले लाल सेना द्वारा अपनाए थियो।
हामी भने रूप मा, हतियार को मूल संस्करण 1930 मा विकास भएको थियो। तीन वर्ष पछि सिरियल उत्पादन सुरु भयो। धेरै सकारात्मक गुण भए तापनि उहाँले दुई अत्यन्त गम्भीर बेफाइदा थियो: आगोको दर प्रति मिनेट मात्र 360 राउंड्स थियो, र भारी वा अप्ठ्यारो पसलहरूमा प्रयोग समावेश मूल डिजाइन मा रूपमा व्यावहारिक दर, पनि कम थियो। मेशिन गन को सिरियल उत्पादन को समापन मा निर्णय जो आफ्नो समय वास्तविकताहरु संग पनि लगातार छैन, 1935 मा अपनाए थियो किन कि छ।
स्थिति उपाय गर्न, विकास पौराणिक Shpagin, तुरुन्त ब्यान्ड खुवाउने बारूद संग ड्रम बिजुली आपूर्ति सर्किट प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्ने ल्याएको थियो। हथियार स्विंग हात, ड्रम मा पाउडर ग्याँसहरु को ऊर्जा रूपान्तरण जसमा प्रणाली लागू गरेर, यसलाई विद्यमान प्रणाली सही थियो। लाभ यस्तो परिमार्जनहरू जवान सोभियत गणतन्त्र महत्वपूर्ण थियो कि कुनै पनि गम्भीर र महंगा परिमार्जनहरू समावेश थिएन थियो।
मेशिन बन्दूक 1938 मा पुन: अपनाए थियो। उहाँले ANC एक सार्वभौमिक हतियार मा उत्तेजित गर्दछ जो संग बहु-कार्य मिसिन, विशेष गरी राम्रो धन्यवाद छ: यसलाई सजिलै, शत्रु जमीन सेना (को fortifications विनाश सहित), हेलिकप्टर र कम उडान विमान विनाश दबाउनु साथै प्रकाश Armored वाहन immobilize गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। हावा वस्तुहरु मिसिन को समर्थन bipod को साथ स्थापना संग decomposed नष्ट गर्न।
किनभने यसको उच्चतम लडाई कौशल को DSK लगभग सबै सैन्य शाखा मा योग्य लोकप्रियता गरिन्थ्यो। युद्ध मिसिन बन्दूक को अन्त्यमा अलिकति परिमार्जन गरेकोले। यो शक्ति र सटर विधानसभा को संयन्त्र केही घटक असर गरेको छ। साथै, बैरल माउन्ट एक अलिकति परिमार्जन तरिका हो।
बन्दूक अन्तिम परिमार्जन, 1946 (DShKM) मा सेवा मा राख्नु, यो स्वचालन को एक अलि फरक सिद्धान्त प्रयोग गर्दछ। पाउडर ग्याँसहरु को प्वाल मार्फत बैरल देखि डाईभर्ट। एक गैर-प्रतिस्थापन को ट्रंक, यो ठंडा पंख (रेडिएटरको जस्तै) को लागि प्रदान। बलियो प्रयोग recoil neutralize गर्न थूथन ब्रेक विभिन्न डिजाइन को।
दुई परिमार्जनहरू बन्दूक बीच मुख्य फरक - को फिडर को यन्त्र। यसरी, DShKM मा स्लाइड प्रकार सिस्टम प्रयोग, यसको पूर्ववर्ती गर्दा - ड्रम। तथापि, Kolesnikov सिस्टम मिसिन मौलिक यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन केहि रूपमा, 1938 देखि पूर्ण अपरिवर्तित रहन्छ। यो फ्रेम मा मेशिन गन 160 किलोग्राम वजन। निस्सन्देह, यो यसको प्रयोगमा सुविधाको लागि पनि राम्रो छ। तर, हतियार अक्सर भारी मिसिन को प्रयोग आवश्यक बनाउन विरोधी विमान रूपमा प्रयोग र शत्रु ज्योति Armored वाहन नियन्त्रण गर्न प्रयोग।
को ANC को आधुनिक प्रयोग
को बोट मा महान देशभक्तिपूर्ण सोभियत संघ को युद्ध समयमा यो मोडेल को बारेमा नौ हजार बन्दुक गरेको थियो। तर, युद्ध पछि, ANC धेरै लोकप्रिय विश्वव्यापी थियो। त्यसैले, यसको परिमार्जन, DShKM, अझै पनि पाकिस्तान र चीन मा उत्पादन गर्न जारी छ। त्यहाँ रूसी सेना को आरक्षित डिपो मा बन्दुक को स्टक जानकारी पनि छ। धेरै लोकप्रिय एक हतियार हो रूस अफ्रीका मा संघर्ष मा।
भेटेरान यी हतियार सबै शाब्दिक छन् कि दायाँ धेरै सभ्य girth चड्डी मार्फत पातलो रूखहरू र pierces तल कटौती सम्झना। गरिबी सशस्त्र पैदल (र के छ ती भागहरु फेला) विरुद्ध त्यसैले, यो "पुरानो मान्छे" पूर्ण काम गर्दछ। तर गरिबी प्रशिक्षित सेना को मामला मा विशेष सान्दर्भिक छ जो मेशिन गन, को मुख्य लाभ - संचालन यसको अचम्मको विश्वसनीयता र सादगी।
तर, ANC केही सैन्य विशेषज्ञहरु र पनि संदेह DShKM। यो हतियार दोस्रो विश्व युद्ध को वास्तविकताहरु विकास भएको थियो भन्ने तथ्यलाई। त्यसपछि हाम्रो देश लगभग सामान्य पाउडर थियो, तर किनभने विशेषज्ञहरु स्लिभ enlarging लागि रोजेका। फलस्वरूप, यस munition भारी र पनि उच्च शक्ति छ। त्यसैले, हाम्रो संरक्षक - 12.7h108 मिमी। नाटो ब्राउनिंग द्वारा नै बारूद प्रयोग ... 12,7h99 मिमी! र दुवै कारतूस लगभग एउटै शक्ति छ कि proviso यो।
तर, यो घटना सकारात्मक पक्ष हो। घरेलु कैलिबर बारूद 12.7 र 14.5 मिमि दुवै - आधुनिक gunsmiths एक वास्तविक fount। त्यहाँ आफ्नो ठूलो-आयामी विशेषताहरु राख्ने भनेर थप शक्तिशाली कारतूस सिर्जना लागि सबै पूर्वापेक्षा छन्।
फिर्ता 70s मा सोभियत सेना droves मा सुरु मेशिन गन Nikitina डिजाइन, Volkov र Sokolov सार्न - "रक।" हतियार, 1972 मा सेवा मा लिएको थियो, HCB को संक्षिप्त नाम प्राप्त, तर यो दिन रूसी सेना को प्राथमिक भारी मेशिन गन रहनेछ।
यसको विशिष्ठ सुविधाहरू एक अति कम वजन छ। यो मिसिन संग मात्र 41 किलोग्राम वजन भारी मेशिन गन एनएसवी! यो वास्तविक द्रुत को गणना गर्ने युद्धभूमिमा आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। हामी त्यही DShKM संग नयाँ बन्दूक तुलना भने, तुरुन्तै यसको सरल, संक्षिप्त र तर्कसंगत डिजाइन द्वारा मारे। लौ arrester जो सही "पहिचान" गर्न सक्नुहुन्छ "रक" ट्रंक, एक चोटीदार आकार छ। यो हतियार धेरै फरक कारण ज्ञात छ।
एनएसवी एक किलोमिटर दूरी त्यो प्रसिद्ध भए (!) को गोलीले को अर्धव्यास फैलाउन हतियार यस प्रकार को लागि लगभग एक निरपेक्ष रेकर्ड छ जो एक र आधा मीटर, अधिक छैन। मेशिन बन्दूक मा आदर उपनाम "Antisnayper" दुई चेचेन अभियान थियो। यसको आवेदन विशिष्टता उहाँलाई हतियार यस प्रकार लागि लगभग सबै आधुनिक परिमार्जनहरू शक्तिशाली दृष्टि राख्न अनुमति दिने, अपेक्षाकृत कमजोर लाभ छ गर्न धेरै तरिकामा, यो कारण छ।
यस संक्षिप्त NSVT छ जो एक ट्यांक भेद पनि छ। यो टी-64 बाट सुरु हुने, को ट्यांक मा माउन्ट छ। घरेलू हतियार को नेता, टी-90, पनि यसको सशस्त्र छ। यी मिसिन मा सैद्धांतिक NSVT विरोधी-विमान हतियार रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर व्यवहार मा यो समय रूपमा जमीन लक्ष्य दबाउन प्रयोग भएको छ। तल आधुनिक लडाई हेलिकप्टर ल्याउन विरोधी विमान मेशिन गन को (विमान उल्लेख छैन) सैद्धांतिक सम्भव छ, तर यो उद्देश्य लागि धेरै राम्रो उपयुक्त मिसाइल रूसी हतियार हो।
कर्ड "Kovrov gunsmiths-Degtyarevtsy" को लागि खडा छ। Kovrov यसको निर्माणमा काम सोभियत संघ पतन पछि तुरुन्तै थाले। कारण सरल छ: त्यो समय मा "को रक" को उत्पादन देश को रणनीतिक चासो पूरा गर्दैन काजाकिस्तान इलाका, थियो।
नयाँ परियोजना को मुख्य डिजाइनर Namidulin, Obidin, Bogdanov र Zhirehin थिए। आधार क्लासिक एनएसवी लिएको थियो, तर banal gunsmiths आफ्नो आधुनिकीकरण सीमित छैन। पहिले, एक प्रकाश मेशिन गन अन्तमा छिटो परिवर्तन बैरल पायो। यो KORPELA लगभग सारा अनुसन्धान संस्थानों द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, तर परिणाम लागत छ: यसलाई प्रदान गर्दछ जो अधिकतम वर्दी फायर समयमा सामाग्री ठंडा विशेष प्रविधि, गरेको छ। बस किनभने शुद्धता र शुद्धता (एनएसवी तुलना) को सुविधाहरू एक लगभग दुई पटक वृद्धि! साथै, कर्ड पहिलो मेशिन गन, जसको लागि त्यहाँ नेटो क्यासेट को एक "आधिकारिक" संस्करण हो थियो।
अन्तमा, जो प्रभावकारी आगो एक bipod अनुमति दिन्छ कक्षा, मा मात्र हतियार हो। यसको वजन 32 किलोग्राम छ। एक पंख हुनुको टाढा, तर तपाईं को दुई चोर्न सक्छ। जमीन लक्ष्य मा Sighting दायरा किलोमिटर लगभग दुई छ। रूस भारी मिसिन बन्दुक अरू के के हुन्?
र Kovrova फेरि brainchild। यो संसारमा ठूलो कैलिबर मिसिन बन्दुक को वर्ग को सबै भन्दा शक्तिशाली सदस्य हुनुहुन्छ। युद्घ सामांग्री विशिष्ट आफ्नो लडाई शक्ति छ: यसलाई विरोधी-ट्यांक बन्दुक र मिसिन बन्दुक शक्ति जोडती। आखिर, एक भारी मेशिन गन क्यासेट CPV - "एउटै", दिग्गज 14,5h114! हाल विगतमा, यसको मदतले तपाईं बाहिर लगभग कुनै पनि लडाई हेलिकप्टर वा हल्का Armored वाहन क्षमता प्रतिद्वन्द्वीको दस्तक गर्न सक्नुहुन्छ।
एक प्रतिभाशाली gunsmith आफ्नो विकास, उहाँले यसको आफ्नै पहल मा, 1943 मा सामेल भए। डिजाइनर लागि आधार आफ्नै डिजाइन को 20 मा लिए-विमान बन्दूक। यसलाई छिट्टै अघि त्यो राज्य टेस्ट ShVAK गुमाए, अझै यसको संरचना Vladimirov सेट उद्देश्य लागि एकदम सरल र विश्वसनीय थियो उल्लेख गर्नुपर्छ। हामी अलिकति digress। आज आफ्ना भारी मिसिन बन्दुक (फोटो कि यस लेखमा छ) सोभियत ट्यांक सेवा गर्ने हरेक crewman थाह: Gunsmith पूर्णतया उहाँको जीवनको उद्देश्य महसुस गर्न सक्षम!
डिजाइन गर्दा Vladimirov पनि "मैक्सिम" मा उत्कृष्ट साबित जो छोटो recoil, संग शास्त्रीय योजना प्रयोग। स्वचालित मेशिन गन मात्र स्वचालित आगो को मर्मतका अनुमति दिनुभएको छ। को CPV को पैदल संस्करणमा, Easel फारम प्रयोग गरिएको छ उज्यालो बन्दूक resembling। मेशिन धेरै पटक स्तरवृद्धि गरिएको छ, र युद्ध समयमा सिपाहीहरूले अक्सर आफ्नै, लडाई को प्रकृति अनुसार गर्छन्। उदाहरणका लागि, द्वन्द्व सबै पक्षहरूबाट अफगानिस्तान मा घर स्थापित अप्टिकल दृष्टि संग CPV प्रयोग।
1950 मा, ट्यांक परिमार्जनहरू विकास राम्ररी सिद्ध हतियार शुरू भएको थियो हो। चाँडै Vladimirov भारी मेशिन गन को सोभियत संघ उत्पादन लगभग सबै ट्यांक सेट गर्न थाले। यो संशोधन मा, हतियार गम्भीर परिमार्जन: एक बिजुली शटर (27B), कुनै sighting उपकरणहरू अप्टिकल ठाँउहरु ट्यांक कार्यस्थल गनर र कमान्डर को सट्टा प्रयोग गरिन्छ जो।
अफ्रीका मा, रूसी भारी मिसिन बन्दुक साह्रै सबै लोकप्रिय, अपवाद बिना: तिनीहरूले आधिकारिक सेनाले र मिश्रित गिरोह को hordes रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो सैन्य सल्लाहकारहरू ती क्षेत्रहरुमा पश्चिमी सशस्त्र भर उभिए जो सबै प्रकाश Armored वाहन, उहाँले सजिलै सोझो रूपमा संयुक्त राष्ट्र सेना सैनिकहरु मा अभिनय, को CPV को धेरै डराएका थिए कि सम्झना। अब लगभग सबै "सजिलो" BTR र BMP सम्भावित शत्रु राम्रो यो भारी मेशिन गन सुरक्षित छ। कुनै पनि अवस्थामा, उहाँलाई लागि frontal प्रक्षेपण पूर्ण "बन्द" गर्न।
तर, सबै भारी मिसिन बन्दुक रूस (सोभियत संघ समय मा) अफगानिस्तान मा मुजाहिद्दीन को बाँध्न मा अत्यन्तै लोकप्रिय थिए। यो सोभियत Mi-24 को बारे मा 15%, मार्शल कारण हराउने किनभने यी हतियार को तल गोली थिए विश्वास छ।
घरेलू भारी मिसिन बन्दुक को विशेषताहरु को तुलना तालिका
दर (प्रति मिनेट राउंड्स)
Sighting दायरा, पु
वजन, किलो (शरीर बन्दूक)
भारी मिसिन बन्दुक, नाटो
देशहरूमा नाटो ब्लक यी हतियार विकास गर्न धेरै हदसम्म नै लाइनहरु, देश को लागि विशिष्ट थिए जो साथ थियो (उदाहरणका लागि, कैलिबर मिसिन बन्दुक लगभग समान)। संग बराबर सफलता parapets पैदल र शत्रु को प्रकाश Armored वाहन लागि दुवै ukryvshuyusya असर सिपाहीहरूले, एक शक्तिशाली र विश्वसनीय मेशिन गन माग।
तर, दुई हतियार-ग्रेड विद्यालय बीच मौलिक मतभेद छन्। यसरी, सामान्य मा जर्मन Wehrmacht भारी मिसिन बन्दुक छैन सेवामा थिए। किन नाटो मुख्य रूप एकल M2NV, अब हामी छलफल जो प्रयोग गरिन्छ छ।
M2NV ब्राउनिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकी सेना उहाँले चाँडै नयाँ र होनहार मा नमूनाहरू प्रयोग हतियार परिवर्तन गर्न रुचि भन्ने तथ्यलाई लागि प्रसिद्ध छ। M2NV को मामला मा यो नियम काम गर्दैन। यो 1919 देखि दिग्गज ब्राउनिंग द्वारा डिजाइन, सेवामा "हजुरबुबा",! निस्सन्देह, मेशिन बन्दूक एमजी-3, को Bundeswehr को पाखुरामा खडा र एमजी-42 को प्रतिलिपि आधुनिक भइरहेको, "हिटलर देखे" पुरातन वंश उहाँसँग तुलना गर्न सकिन्छ, तर यो नाटो 7,62h51 कैलिबर प्रयोग गर्दछ।
मेशिन गन 1923 मा सेवा प्रवेश। 1938 मा, यो एक लम्बी स्टेम थपेर स्तरवृद्धि। वास्तवमा, यो फारम मा, यो अझै पनि विद्यमान छ। तब देखि, यो हालसम्म त्यहाँ सिद्ध हतियार एक पर्याप्त वैकल्पिक प्रतिस्थापन गर्न प्रतियोगिताहरु सञ्चालन निरन्तर, बारम्बार बन्द लेख्न प्रयास "पुरानो मान्छे", तर।
यसको विकास इतिहास धेरै रोचक छ। अमेरिकी सेना तुरून्त एक भारी मेशिन गन, एक विश्वसनीय हार शत्रु विमान (क्रम सामान्य Pershing, अभियान बल को कमान्डर आए) प्रदान कुन आवश्यक छ। जो मिति बाहिर चलिरहेको थियो ब्राउनिंग, बस र elegantly प्रविष्ट गर्नुभयो।
कुनै पनि हतियार जग एक क्यासेट र एक पर्याप्त कैलिबर मिसिन को Yankees ती दिनमा बन्दूक भएकोले छैन, उहाँले केवल आफ्नो डिजाइन को क्यासेट 7.62 लिए र दुई पटक यो वृद्धि गरिएको थियो। यो उपाय अस्थायी रूपमा देखेको थियो, तर निर्णय आश्चर्यजनक सफल साबित: पश्चिमी वस्तुतः सबै भारी मिसिन बन्दुक यो बारूद प्रयोग गरिएको छ।
खैर, यो स्थान digression बनाउन छ। जो यस श्रेणीका घरेलू र विदेशी हतियार प्रयोग कारतूस, व्यावहारिक नै छ भन्ने याद हुन सक्छ। हामी पहिले नै यो घटना को लागि कारण बारे कुरा, तर केही शब्द भन्न गरौं छन्। तपाईं तुलनात्मक तालिका हेर्न भने, तपाईं नाटो बीच बारूद 14.5 मिमि भारी मिसिन बन्दुक पूर्ण कमी देख्नुहुनेछ।
यो फेरि कारण सैन्य सिद्धान्त मा फरक छ: Yankees मान (छैन अव्यावहारिक) युद्घ सामांग्री यस प्रकारको को कार्यहरू copes कि ब्राउनिंग डिजाइन पुरानो munition। पश्चिमी वर्गीकरण मा, एक ठूलो गेज छ सबै पहिले नै "सानो उपकरण" बुझाउँछ र त्यसैले एक मेशिन गन छ।
बन्दूक "ब्राउनिंग M2 HQCB" (बेल्जियम)
क्लासिक ब्राउनिंग को सन्तान marvelously सफल बाहिर गरिएका भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यसको विशेषताहरु प्रबन्ध छन्, सबै पश्चिमी सेनाले। सधैं गुणस्तर हतियार लागि प्रसिद्ध छ जो Belgians, अमेरिकी मेशिन गन एक स्वतन्त्र आधुनिकीकरण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। वास्तवमा, सुरुमा Herstal कम्पनी आफ्नै को कुरा गर्न अभिप्रेरित, तर किनभने प्रक्रिया को लागत कम गर्न र पुरानो workings संग निरन्तरता कायम गर्न आवश्यकता को, विशेषज्ञहरु सम्झौता गर्न बाध्य भए।
तथापि, प्रभावित कुनै तरिका छ हतियार को सुधार मा। बेल्जियम Armourers यसको "तातो" प्रतिस्थापन लागि सरल संयन्त्र एक भारी बैरल यसलाई सुसज्जित। यो निकै हतियार को झगडा गुणहरू सुधार भएको छ। पहिले संस्करण मा, बैरल कम्तीमा दुई मान्छे आवश्यक थियो प्रतिस्थापन लागि अमेरिकी "दुई" "Thoroughbred", र काम खतरनाक rarity थियो। धेरै गणना जेनिथ M2NV परिमार्जनहरू यसलाई मा औंलाहरु हराएको छ। स्वाभाविक, तिनीहरूले यो सानो हतियार प्रेम गर्नुभयो। मिसिन बन्दुक ब्राउनिंग विरोधी विमान परिमार्जन हदसम्म यस कारण लागि "OERLIKON" जो मात्र धेरै शक्तिशाली थिए बन्दुक, बदलिएको थियो, तर पनि यो बेफाइदा छैन।
यो पनि क्रोम भित्री सापट व्यास, नाटकीय पनि लडाई को तनाव अन्तर्गत आफ्नो survivability वृद्धि जो उन्नत थपियो। केवल एक व्यक्तिको प्रतिस्थापन लागि आवश्यक छ प्रिपेरेटरी सञ्चालनका ट्रंक नम्बर न्यून पारिएको छ, किनभने र प्राप्त जोखिम लगभग कुनै पनि जलाइएको यस किसिम को बन्दूक देखि शूटिंग राम्रो छ।
Oddly पर्याप्त, तर यो सम्भव Chrome बन्दूक को लागत कम छ। को पहिले Stellite कोटिंग संग व्यारेल प्रयोग भन्ने तथ्यलाई। यो धेरै महंगा थियो, र Chrome सँग लेपित कम्तिमा दुई पटक समकक्षों को भन्दा सानो भएको बैरल, सेवा जीवन। मिति गर्न, Belgians कुनै पनि पुरानो M2NV M2 HQCB सेना regimental कर्मचारी मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ बनाउन विभिन्न आधुनिकीकरण किरा उत्पादन।
मेशिन गन L11A1 (HMG)
र अघि हामीलाई एक पटक फेरि - "एउटै" Browning। तर, अंग्रेजी संस्करणमा। निस्सन्देह, एकदम स्तरवृद्धि र सुधार भएको छ। धेरै विशेषज्ञहरूले "सन्तान" M2VN सम्पूर्ण लाइन बीचमा सबै भन्दा राम्रो विचार गर्नुहोस्।
को "नरम हार्डवेयर" - नवाचारै बीचमा। हामी गीत तर्फ छोड्नु भयो भने, यो एक भारी मेशिन गन धेरै, धेरै सही हतियार बन्नेछ कारण जो प्रभाव र कम्पन, दर को एक प्रणाली छ। साथै, उहाँको Majesty को gunsmiths प्रणाली द्रुत-परिवर्तन बैरल को आफ्नो संस्करण प्रस्तुत। सामान्य मा, यो प्रस्तावित योजना, को Belgians समान धेरै पक्षहरूमा छ।
तुलना तालिका विशेषताहरु पश्चिमी भारी मिसिन बन्दुक
36-38 (आधारमा जारी को वर्ष मा)
ब्राउनिंग M2 HQCB
हामी स्थानीय भारी मेशिन गन बारेमा जानकारी यो तालिकाबाट डाटा तुलना भने, यो हतियार को यो वर्ग हदसम्म यस्तै हो भनेर स्पष्ट हुन्छ। साना, ठूलो मा सजिलै देखिने मतभेद आधारभूत प्राविधिक विशेषताहरु मा फरक। पश्चिमी भारी मिसिन बन्दुक एकदम अधिक वजन। यो कारणले गर्दा आफ्नो भन्ने तथ्यलाई छ सैन्य सिद्धान्त शायद सैन्य उपकरण मा त्यस्तो हतियार को स्थापना प्रदान, आफ्नो आवेदन यसलाई पैदल सुझाव।
सबैभन्दा नाटो बन्दुक सेनाहरुको मा साधारण (पाठ्यक्रम, आफ्नो मानक) 5.56 र 7.62 छन्। राम्रो प्रशिक्षण snipers र आवरण एक लडाई अवस्थामा सञ्चालन एक ठूलो संख्या द्वारा अफसेट अपर्याप्त firepower एकाइहरु उड्डयन समूह र / वा हतियार detachments। साँच्चै, एक भारी मेशिन गन ट्यांक यो दृष्टिकोण जीवन सही छ भनेर, दस पटक बलियो लड शक्ति छ।
अमेरिकी विमान वाहक "Garri Trumen": वर्णन, विशेषताहरु र रोचक तथ्य
कसरी उचित लगानी बिना स्क्राच देखि "विदेशी मुद्रा" मा प्ले, र यो सम्भव छ गर्न?
वोरोनिश टायर प्लान्ट: इटालियन अनुभव
ग्याँस पिस्टन शक्ति: सञ्चालन सिद्धान्त। संचालन र ग्याँस पिस्टन शक्ति बिरुवाहरु को मर्मतका
डोजर टी-170। विनिर्देशों बुलडोजर टी-170
नरम गहुँको: वर्णन, खेती, प्रयोग
TL-WR1043ND। वायरलेस राउटर। समीक्षा र परीक्षण
"Lamoda" रूपमा अर्डर रद्द गर्न? वस्त्र र जूता Lamoda को अनलाइन स्टोर
रिचर्ड दयालु - यो शताब्दीको पालो मा एक अभिनेता
यस वर्ष को गर्मी समयमा अद्भुत विवाह पोशाक फेला!
कसरी घर मा अनाज अङ्कुराउन?
Rex हैरिसन: चलचित्र, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
शब्द गर्न पर्यायवाची र विलोम "सुन्दर"
होटल Petrosana होटल3* अपार्टमेट्स (Ayia नापा, क्रेते): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
कसरी यो अवस्था रोक्न: एक तर्साउने के हो?
रियो La Plata बेसिन: विवरण, फोटो